International Text Izi ozi Statistics | Martech Zone
Monday, October 17, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Adam Obere
E nwere 4.2 ijeri mobile ọrụ tinye n'ọrụ ederede ozi n'ụwa nile…. nke ahụ bụ 3 n’ime mmadụ anọ ọ bụla nọ n’ụwa! Ọ na - emekwa ka ederede ederede bụrụ ọrụ 4 kacha jiri rụọ ọrụ na ụwa na 1 puku ijeri tweets zigara n'afọ gara aga. N'ezie nde mmadụ 6.1 nwere ekwe ntị… mana ENWEGH electricity ọkụ eletrik, na-ejikarị batrị ụgbọ ala ha ana ekwentị ha. Na oke uto nke smartphones na United States, ọtụtụ ndị na-eleghara ozi ederede mana ọ bụ naanị nke teknụzụ dị n'etiti ekwentị niile na ahịa (na mpụga ịkpọ oku).
Elegharala ike nke ozi ederede - anyị nwere ndị ahịa na nke anyị ikpo okwu ahia ala na-ere ọtụtụ ụlọ iji tinye ederede ederede dịka akụkụ nke ngwakọta mgbasa ozi ha. Nakwa, anyị nwere ụlọ oriri na ọ majorụ majorụ ndị isi na-eme ka ndị mmadụ gaa n'ọnụ ụzọ ha site na iji ozi ederede. Doug na-eji ozi ederede mgbe ọ na-ekwu okwu… ọ nwere 24% nzaghachi omume n'otu okwu, na-arịọ ndị bịara ya ederede MKTG na 71813 ịdenye aha ya ala.
E wetara ihe omuma a site na MBA n'ịntanetị
Mmetụta gburugburu ebe obibi nke SPAM